Daawo muuqaalka: Majmaca culimada Soomaaliyeed oo doortay hogaan cusub |
Daawo muuqaalka: Majmaca culimada Soomaaliyeed oo doortay hogaan cusub
Shir ballaaran oo ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen boqolaal ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku doorteen gudoomiyaha Majmaca culima’udiinka Soomaaliyeed kadib markii uu dhawaan geeriyooday fudoomiyihii hore ee Majmaca Culimada Soomaaliyeed Culimada shirka ka qayb galay ayaa gudoomiyaha cusub ee Majmaca u doortay Sheekh Yuusuf Cali Caynte.
Sheekh Cali Sheekh Max’uud Sheekh Cali dheere oo ka tirsan culimada Soomaaliyeed isla markaane ah agaasimaha guud ee waaxda diinta wasaarada garsoorka dalka oo munaasabada hadal ka jeediyey ayaa sheegay in wasaarada garsoorka iyo cadaalada xukuumada Soomaaliya ay garab taagan tahay Majmaca Culimada Soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday iney si buuxa u barbar istaagi doonaan.
Sheekh Cali-dheere ayaa gudoomiyaha cusub ugu baaqay inuu ku dadaalo mideunta iyo isu keenka culimada Soomaaliyeed si meesha looga saaro tafaraaruqa ku kala dhexjira Culimada Soomaaliyeed.
Sheekh Cali Max’uud Sh Cali Wajiis oo isne ka mid ah culimada ugu caansan dalka Soomaaliya ayaa isne sheegay in culimada looga baahan yahay iney wacyigaliyaan bulshada Soomaaliyeed isla markaane ay jahaeeyaan shacabka oo uu sheegay iney marin habaabin ku wadaan kooxo ku adeeganaya magaca diinta sida uu hadalka u dhigay.
Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo loo doortay gudoomiyaha cusub ee Majmaca culima’udiinka Soomaaliyeed ayaa madasha ka sheegay inuu culimada uu ku hogaamin doono isku xirnaan isagoona ballan qaaday inuu ku dadaali doono baraarujinta shacbiga Soomaaliyeed,wuxuuna ugu baaqay guud ahaa bulshada Soomaaliyeed iney garab istaagaan dowlada Soomaaliya si markale dalka Soomaaliya nabad loogu soo dabaalo.